Izindaba - Umgomo nokusebenza kwesibhamu se-fascia
Idivaysi ekhipha insipho enamagwebu
Idivaysi ekhipha insipho yakudala
Idivaysi ekhipha insipho enedada
Umgomo nokusebenza kwesibhamu se-fascia
Isibhamu se-fascia, esaziwa nangokuthi ithuluzi lokujula le-myofascial deep, iyithuluzi lokuthambisa lezicubu ezithambile eliyekelela izicubu ezithambile zomzimba ngokufaka umfutho ophakeme kakhulu. Isibhamu se-fascia singacatshangwa njengenguqulo yomphakathi ye-DMS (Electric Deep Muscle Stimulator). Izinga lokudlidliza liyahlukahluka lapho lisetshenziswa, futhi umsebenzi oyisisekelo uyefana nowe-DMS. Isibhamu se-fascia siyindlela ephumelelayo yokwelapha ubuhlungu bezicubu ezithambile. Ivuselela umsebenzi wayo wokuthola amandla ngokusebenzisa imvamisa ye-vibration ezinzile, bese ibamba iqhaza eliphumelelayo ekunciphiseni ukungezwani kwemisipha nokufeza injongo yokukhululeka kobuhlungu.
Isisekelo sesibhamu seFascia ukusebenzisa imoto yaso enejubane elikhethekile ukushayela ngaphakathi “umkhonto”, ngokudlidliza kwemvamisa ephezulu kuzophoqelela nokudlidliza kudluliselwe ku-fascia yomzimba, imisipha ejulile, ngaleyo ndlela kunciphise ukucindezela kwezicubu zendawo, umphumela wokwandisa ukugeleza yegazi ezicutshini, ukukhululeka kwemisipha, futhi kungenza izicubu zomzimba zikhiqize ukufuduka okuhlobene ngokuvumelana nesiyoni, ukunciphisa ukunamathela kwezicubu, ukubuyisela ukuqina kwemisipha kanye ne-fascia, Ukuphumula kwe-fascia eqinile futhi eqinile nokukhuthaza ukujikeleza kwegazi kungakhulula ezinye izimpawu ezingakhululekile zomzimba womuntu. Futhi isibhamu se-fascia singasiza ekuthuthukiseni izimpawu zobuhlungu beziguli ze-fasciitis futhi sikhuthaze ukululama kwezicubu nezithambile.
Isibhamu se-fascia ngokuvamile sinamakhanda amabili ayindilinga. Inhloko enkulu eyindilinga ivamise ukusetshenziselwa ihlombe nangemuva, izinqe namathanga. Amakhanda ayindilinga amancane avame ukusetshenziselwa imisipha emikhulu efana nezingalo namankonyane. Uma usebenzisa isibhamu se-fascia, kufanele sisetshenziswe ngokuya ngokuthungwa kwemisipha yomuntu kanye ne-fascia, hhayi kuphela endaweni ebuhlungu yomsipha. Kodwa-ke, isibhamu se-fascia akufanele sisetshenziswe ekhanda, umgogodla womlomo wesibeletho, umgogodla, intamo, i-clavicle, ikhwapha, i-popliteal fossa, ukuhlangana kwamadolo, ukuhlangana kwendololwane nezinye izingxenye ezinenqwaba yemizwa nemithambo yegazi.
Isikhathi Iposi: Apr-13-2021
Amadivayisi: Cha. 58, Yongning Road, Yuyao, Zhejiang, China (Mainland)
Hot Products - Ibalazwe - AMP Ucingo